Kudzora Kwemhando yepamusoro - Shandong Luscious Pet Chikafu Co, Ltd.
Nyuchi Jerky Series
Dhadha Jerky Series
Yemombe Jerky Series
Gwayana Jerky Series
Namatira Sausage Series
Mazino Chews Akateedzana
Hove Ganda Rakateedzana
Wet Chikafu Series
Yakaoma Jerky Series
Yedu Yekuedzwa Center
Kero: Yepamberi Industrial Park, Yangkou Town, Shouguang Guta, Shandong, China (Maodzanyemba eZhongxin Road, Kumabvazuva kweChuanbo Road)
Runhare: + 86-536-5855263
Iyo kambani yakapasa iyo HACCP, ISO9000, BRC certification uye kugadzirwa kwese zvakanyatsodzorwa zvinoenderana nematanho eHACCP nezvinodiwa.
1.Team: Iyo fekitori ine yakakosha timu inokodzera yevashandi makumi mashanu vanoshanda mune yega nzira yekugadzirwa. Vazhinji vavo vane anopfuura makore gumi echiitiko mubasa ravo.
2.Material: Zvese mbishi zvinhu zvinobva kupurazi redu pachedu uye China Kuongorora uye Quarantine yakanyoreswa chirimwa Kuti uve nechokwadi chekuti zvinhu zvatinoshandisa ndezve 100% zvisikwa uye hutano
3.Production Kuongorora: Iyo fekitori ine simbi yekuonekwa, hunyoro bvunzo, Yakakwira tembiricha sterilization muchina etc. kudzora kugadzirwa kuchengetedzeka.
4.Finished zvinhu zvekuongorora: fekitori yakagadzira labouratory ine gasi chromatography uye emvura chromatography muchina zvakare nemuchina wese unoshandiswa kuongorora kwemakemikari akasara uye microorganisms.Mabatiro acho anotariswa uye kudzorwa kubva pakutanga kusvika pakupera.
5.Iye wechitatu bato rekuongorora: Isu zvakare tine kwenguva yakareba kubatirana pamwe neyechitatu bato bvunzo institution senge SGS uye PONY Izvi ndezvekuve nechokwadi chekuvimbika kweese mhedzisiro kubva kune yedu pachedu lab.
DZIDZA ZVIMWE Scan kana CODE